Tababaraha Xulka France Oo Xaqiijiyay In Uu Ferland Mendy Ku Biirayo Real Madrid – Wararka Ciyaaraha Maanta
Tababaraha Xulka France Oo Xaqiijiyay In Uu Ferland Mendy Ku Biirayo Real Madrid
Tababaraha xulka qaranka France ee Didier Deschamps ayaa xaqiijiyay in uu daafaca kooxda Lyon ee Ferland Mendy ku dhawyahay in uu noqdo xiddig kooxda Real Madrid ah.
Daafaca kooxda Lyon ee Ferland Mendy ayaa ku dhaw in uu ku biiro kooxda Real Madrid kadib markii uu maray tijaabada caafimaadka kooxda Real Madrid inkasta oo uu shaki ku jiro natiijada sabab la xidhiidha dhaawac feedhaha ah.
Tababaraha Xulka qaranka France ee Didier Deschamps oo ka hadlaya shirkii ka horeeyay kulanka xulka qaranka France ee caawa ayaa sheegay in uu Mendy ku dhawyahay in uu noqdo xiddig Real Madrid ah xagaagan.
Isaga oo arintaas ka hadlaya ayaa yidhi”Mendy waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed cajiib ah”.
“Ferland Mendy waxa uu ka ciyaarayay heerka 2-aad ee France laba sano ka hor laakiin haatan waxa uu ku dhawyahay in uu ku biiro Real Madrid, waxa uu u noqon doonaa xiddig muhiim ah oo ay ku faa,iidaan”.
Waxa uu hadalkiisa sii raaciyay” Ferland Mendy waxa uu ka ciyaari karaa in ka badan hal boos, waxa uu ka ciyaari karaa labada garab ee daafaca iyo waliba garabka weerarka”.